Jaaliyada Soomaalida ee Norfolk oo codsaday in jawaab deg deg ah laga siiyo dhacdo halkaas ka dhacday – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Jaaliyada Soomaalida ee Norfolk oo codsaday in jawaab deg deg ah laga siiyo dhacdo halkaas ka dhacday
Qoyska iyo asxaabta haweeney Soomaali ah oo maalintii Isniinta aheyd tareen ku jiiray magaalada Norfolk ee gobolka Viginia ayaa dalbaday in jawaab deg deg ah laga siiyo qaabkii uu shilkaasi tareenka ah u dhacay.
Haweeneydaasi geeriyootay oo lagu magacaabi jiray Dhool Guure ayaa muddo 10 sano kahor iyada iyo saygeeda usoo guuray dalka Maraykanka, si ay nolol ka wanaagsan tii Soomaaliya ugu helaan dalka Mareykanka.
Afhayeenka jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada Norfolk ee gobalka Virginia Farxaan Cabdi ayaa sheegay inay meydka marxuumadda laga helay dhismo ay deggnayd, kuna dhow jidka ay maraan tareenadda.
“Laakiin ma garnayno sida uu tareenka ugu dhacay marxuumadda” ayuu yiri Afhayeenka oo ka hadlay shir Jaraa’id, wuxuuna is-weydiiyey qaabka uu u dhici karo shil noocaasi ah.
Waxaa sidoo kale shirka jaraa’id kasoo qeyb galay qiyaastii 30 qof oo ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed, kuwaasi oo dhinac taagnaa Calamadda Somalia iyo kan Maraykanka.
Aadan Kheyr Maxamuud oo ah sayga marxuumada geeriyootay ayaa sheegay inuu ka arga-gaxay shilkaasi, wuxuuna xusay in lagu soo wargeliyay shilkaasi 15 daqiiqo kadib markii uu ka tagay guriga uu qoyskiisa deganaa.
Dhinaca kale, afhayeenka jaaliyadda Soomaalida ku nool magaalada Norfolk ee gobalka Virginia Farxaan Cabdi ayaa sidoo kale sheegay inuu dul tagay meydka marxuumada, islamarkaana uu aqoonsan kari waayey wejigeeda, sababo la xiriiray sida uu tareenka u jiiray.
“Waan aqoon kari waayay wejigeeda, sababo la xiriira sida uu tareenka wejigeeda u jiiray” Sidaasi waxaa yiri Farxaan Cabdi.
Allaha u naxariistee, marxuumadda oo 32 jir ah waxay ifka kaga tagtay 5 carruur ah, oo da’dooda u haxeeyso 6 jir ilaa 13 jir, waxayna booliska halkaasi sheegeen inay baaritaano ku haayaan qaabkii uu u dhacay shilka ay ku geeriyootay
Marxuumada ayaa maalintii shalay oo Arbacada ahayd lagu aasay magaalada Norfolk ee Gobalka Virginia.
Ugu dambeyntii, jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada Norfolk ee gobalka Virginia ayaa la daalaa-dhacaaya cidda xanaaneyn doonta caruurta da’dooda u dhaxeeyso 6 ilaa 13 jir oo ay marxuumada ka geeriyootay.
Halkaan ka Aqriso Warbixinta oo ENGLISH ah